नेकपाको जनता संग जनप्रतिनिधी कार्यक्रम काठेखोलामा : पुराना संरचनाको संरक्षण गर्न माग ! – ebaglung.com
नेकपाको जनता संग जनप्रतिनिधी कार्यक्रम काठेखोलामा : पुराना संरचनाको संरक्षण गर्न माग !
२०७६ भाद्र २६, बिहीबार २०:३३	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
कोपिला कंडेल, बागलुङ २०७६ भदौ २६ । काठेखोला गाउंपालिका वडा नम्वर ६ बिहुंका स्थानियले बिकास निमार्णका योजना सम्पन्न गर्दा पुराना संरचनाको संरक्षण गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ने.क.पा काठेखोला गाउंपालिकाले आयोजना गरेको जनता संग जनप्रतिनिधी कार्यक्रमा बोल्ने सहभागीले गाउंपलिका भित्र बिद्युत व्यवस्थापन सुबिधा सम्पन्न बिद्यालय सर्वसुलभ प्राबिधिक उच्च शिक्षा खानेपनि गोरेटो बाटो निर्माण सुरक्षित घरबास हुनुपर्ने लगायतका माग राखे । स्थानियले वडा नम्वर ६ लाई गाउंपालिका संग जोड्नकालागि भीमपोखरा पाला रेस लेखानी लगायतका क्षेत्रमा पक्की पुल निर्माण गर्न आग्रह समेत गरे ।
सो अवसरमा स्थानियले संघीय सांसद डा. सूर्य पाठक, काठेखोला गाउंपालिकाका अध्यक्ष अमर बहादुर थापा र वडा नम्वर ६ बिहुका अध्यक्ष युक्त प्रसाद कंडेल संग सवालजवाफ समेत गरेका थिए ।
सो अवसरमा संघीय सांसद डा. सूर्य पाठकले बिकास निर्माणका योजनामा पहिलो प्राथमिकता काठेखोला गाउंपालिकालाई दिने बताउदै बिकास निर्माणका कामगर्दा जनताको सुरक्षाको बिषयमा संबेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिए । जनताका समस्यालाई आफुले आफ्नो निजी समस्याको रुपमा लिएको प्रशंग कोट्टाउर्दै डा पाठकले सीमित साधन र श्रोतबाट अधिकाशं योजनामा लगानी गर्न कठिनाई उत्पन्न हुने धारणा ब्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा जनताका सवालको जवाफ दिदै काठखोला गाउंपालिका अध्यक्ष अमर बहादुर थापाले जनताको हित र बिकास निर्माणका काममा आफुनो सदैव साथ रहने बताए । आफु निर्वाचितभएर आएपछि जनताका समस्या संग हरदम नजिक रहदै आएको भन्दै अध्यक्ष थापाले यावत समस्यालाई क्रमिक रुपमा पुरा गर्दै जाने विश्वास दिलाए । उनले वडा नम्वर ६ लाई सुन्तला जोन र दुध उत्पादनको रुपमा अगाडी बढाउने बताए ।
गाउंपालिका अन्र्तगतका ८ वटै वडामा पहिचानका योजना छनोट गरिको छ, अध्यक्ष थापाले भने, जसअन्र्तगत बिहुलाई सुन्तला जोन र दुधउत्पादनको रुपमा अगाडी बढाईने छ ।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रदेश कमिटि सदस्य एबं जिल्ला सचिव ज्ञामनाथ गैरे अनिल, प्रदेश कमिटि सदस्य हिरा बहादुर केसीले मन्तव्य व्यक्त गर्दै आर्थिक सम्मृद्धि र दिगो बिकासका लागि वर्तमान सरकार लागि परेको दाबी गरे । मुलुकलाई सहि ढंङ्गबाट अगाडी बढाउनका लागि जनताको साथ अपरिहार्य रहेको उनिहरुको भनाई थियो ।
त्यसैगरी वडा नम्वर ६ का अध्यक्ष युक्त प्रसाद कंडेलले वडाको योजना सार्वजनिक गर्दै आफुले बिकास निर्माणका हरेक योजना लागु गर्दा जनताको समर्थन र सहकार्यमा अगाडी बढेको बताए । उनले जनताका सवालले आफुले पुरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
कार्यक्रममा नेकपा काठेखोला गाउंपालिकाका अध्यक्ष दिल बहादुर कार्की र नेकपा वडा नम्वर ६ का अध्यक्ष थानेश्वर कंडेलले पार्टीका बेग्लाबेग्लै प्रतिबेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रम नेकपा काठेखोला गाउंपालिकाका अध्यक्ष दिल बहादुर कार्कीको अध्यक्षता, जिल्ला कमिटि सदस्य लक्ष्मी खड्का रोकाको स्वागत मन्तब्य र गाउंपालिकाका सचिव कृष्ण थापाको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
यसैबिच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा वडा नम्वर ६ ले आफ्नै पार्टी कार्यालय स्थापना गरेको छ । वडा नम्वर ६ ईनारपानीमा स्थापना गरिएको सो पार्टी कार्यालयको संघिय सांसद डा. पाठकले उद्घाटन गरे ।
सो अवसरमा बोल्दै उनले पार्टीक गतिबीधिलाई अगाडी बढाउनका लागि पार्टी स्थापनाले महत्पुर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने बताए । कार्यक्रम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी काठेखोला गाउंपालिका वडा नम्वर ६ का अध्यक्ष थानेश्वर कंडेलको अध्यक्षता र वडा नम्वर ६ का अध्यक्ष युक्त प्रसाद कंडेलको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।